Indlela ukurekhoda Karaoke disc. Karaoke izingoma bashise disc
Phakathi emadilini olunesivunguvungu ngezinye izikhathi ufuna ukucula yinto ngokomzwelo futhi kuncike kulo mcimbi. Lokhu kusisiza Karaoke. Kodwa kukhona omunye caveat - amadrayivu etholakalayo ezitolo ngokuvamile musa ukuhlangabezana nezidingo ukuthi sidalula. Hhayi izingoma, hhayi abadlali, nokunye.
Yiqiniso, ingatholakala ibuye ku-inthanethi sidinga ukwakhiwa, futhi ukuhlabelela Duet nomculi, kodwa nawe uzovuma, lena akuyona ncamashi okudingayo. Sikunikeza esikhathi esifushane kanjani ukurekhoda Karaoke disc emzini. Kulokhu, ungenawo nezindleko ezinkulu zezimali kanye nesikhathi. Okokuqala udinga ukuba abhekane nalokho format zezingoma, khetha idrayivu, ofanele kakhulu ukuqopha, futhi uthole ukuthi balungele Karaoke iculo.
Ngaphambi kokuthi udlulele umbuzo kanjani ukurekhoda Karaoke disc, simazi nge welithi "Karaoke".
umsebenzi Izintandokazi baseRussia - ukucula, kungakhathaliseki lapho ukhona nokuthi yini oyenzayo. Khumbula, ukugeza umzimba ngamanzi futhi njalo ukucula ingoma yakhe oyintandokazi, ehamba ikhanda lami njalo ukupheqa ngokusebenzisa ingoma, futhi-ke, intandokazi iholidi endaweni - ibha karaoke, lapho ungakwazi nje uphumule umzimba wakho kanye umphefumulo, kodwa futhi ukubukisa amakhono abo ukucula.
Ukuze ukuhlela kusihlwa Karaoke ekhaya, uzodinga:
I-computer ephathwayo ne-CD-rum noma i-DVD-player.
Microphone (inombolo yabo kuhluka abadlali).
Cishe konke lokhu iyatholakala indlu ngendlu, kodwa bambalwa abantu basebenzisa lesi isethi ukuhlela Karaoke amaqembu. CD Iningi ngomumo eyenziwe edayiswa ezitolo, thina unganelisekile njengoba abezindaba eziningi izingoma ungathandi. Sinikeza ukwenza karaoke zabo disc nge amashuni ajwayelekile futhi ozithandayo. Kodwa ngaphambi kokuba ngiqhubeke ukubhekana umbuzo, indlela ukuqopha Karaoke disc, ake ukubhekana amafomethi wefayela idrayivu okufaneleka kakhulu kunokunye. Siragela phambili nokutjengisa ukubhalelwa sibheke ezinye isofthiwe ezosisiza kule ukurekhoda.
Ukuze uqale nge ukubhuka ukuthi kukhona izinhlobo eziningana Karaoke: umsindo nevidiyo. Inketho yokuqala kufanelekile kuphela uma ujwayelene kakhulu kwengoma, okungukuthi, asikho isidingo inhloli isosha esihlatshelelwayo. Kube kuhlinzekelwe womsindo. Esimeni sesibili sinethuba inhloli isosha esihlatshelelwayo, ubuke noma iyiphi kushintshana ngemifanekiso nokunye, khona-ke isiqophi ukwesekwa.
Namuhla sizoxoxa kuphela ngohlobo wesibili, noma kunalokho, ukuthi ukurekhoda DVD Karaoke disc. Ake sibheke ngesakhiwo ifayela, ngakho-ke ngeke kube sobala ukuthi drive le njongo ukukhetha. Ngokuvamile, lokhu Okuningi-ngamafayela izandiso MID, ST3 noma Kar. Kuyini sici zabo? Uma sibhala umculo evamile, sikhule size sibe ifomu digital, futhi Karaoke iqukethe ukulandelana imiyalo.
Dala iqoqo lakho Karaoke iculo akunzima, ungasebenzisa izingoma ngomumo eyenziwe wemibhalo egcinwayo, iziphi izikhala we inthanethi kancane ngakho. Uma ungakwazi ukuthola ingoma eyintandokazi yakho, ungakha ngokwakho usebenzisa isofthiwe.
Ngaphambi ashise disc Karaoke LG, kumelwe ukhethe i-drive efanele. Nakani yokuthi amafayela alandiwe ube FLY isandiso, badinga sokulungiselela ukuqopha kwi disc. Sebenzisa converters, omunye amahle libizwa Ifomethi ifektri, kuyoba kuqondwe ngisho imfundamakhwela yomsebenzisi, it has inzuzo yokuthi kuba ngokuphelele free. I izingoma uzilungiselele, khetha idrayivu. Okuvame kakhulu format Karaoke - DVD, it is ifundwa ngabantu bonke abadlali kanye nemishini.
Kufanele makudle DVD-R noma -RW. Esimeni sesibili kungenzeka ukubhala ngaphezulu, owokuqala akuyona. Lapho uthenga unaka ukubonakala disc, kungabikho scuffs nokuklwebheka, ungathathi umkhiqizo nge emaphaketheni evulekile noma ephukile.
Izinhlelo, ngawo ungakha DVD noma i-CD ne ezihlukahlukene idatha, inombolo enkulu, kodwa sanquma ukumisa umkhiqizo isofthiwe ngokuthi "UNero". Ake sicabangele ke kabanzi. Indlela ashise DVD-karaoke usebenzisa uNero Express ithuluzi? Manje sizokunika indlwana esisebenzayo, yebo, angayinaki izinto kancane "efana, faka disk elingenalutho" nokunye okunjalo. Ukuqalisa:
Khetha "idatha DVD".
Iwindi uzovela ufuna ukuhambisa idatha ukubhala. Nakani isisindo amafayela kanye nokwenzeka a idrayivu kanzima.
Ku-window olandelayo, hlola ukuthi indlela ezikhethwe disc nalutho kahle. Kukhona ukulungiswa, qiniseka owanquma isivinini ingaphansi ikhompyutha ezihlongozwayo, nika igama lakho elisha drive.
Sabeka wonke amasethingi adingekayo, zonke ungacindezela inkinobho yokurekhoda bese ulinda inqubo ukuqedela. Kungasetshenziswa.
Kule ngxenye sizobheka ukuthi karaoke izingoma bashise disc usebenzisa isofthiwe Ashampoo Burning Studio umkhiqizo. Yiziphi izinzuzo kwalo mkhiqizo? Ashampoo Burning Studio - nhlobo isofthiwe Russified nge interface enembile evumela ukuthi wena ukuyisebenzisa ngisho Wabasaqalayo. Ngaphezu kwalokho, Ashampoo Burning Studio isekela nezakhiwo eziningi, ikuvumela ukuba alobe ngokuphelele yimuphi ngemoto, CD kanye DVD - lokhu iyathinteka. Ake ukugxila DVD ifayela Karaoke okufakiwe. Nalapha futhi, thina ukunikeza umhlahlandlela enemininingwane:
Landa uhlelo, ukusebenzisa, khetha bese ufake amathiphu kwelulwimi Russian.
Sithola esikrinini main lapho kumelwe ukhethe "Shisa Amafayela".
Faka disc nalutho, ukhethe into «ukudala DVD».
Sine ewindini elisha livela, lapha udinga ukwengeza amafayela ofuna ukuba ashise. Ukuze operation efanele uhlelo oyi-londoloza amafayela e-hard drive yekhompyutha yakho.
Ungase futhi wethe igama drive yakho entsha, futhi phansi uhla ebonakalayo ukugcwaliswa, ngakho ungakwazi ukuzulazula, kungakanani isikhala khulula ishiywa kudiski. Chofoza inkinobho "Okulandelayo".
Into elandelayo, khetha "Hlela Izinketho." Kuyadingeka ukuba ulungise ijubane ukurekhoda. Kuyadingeka ukuba Ukusetha i inkomba elilingana isigamu esiphezulu. Okungukuthi, uma isivinini yokuqopha 48, bese sidalula sibalo 24. Lokhu kusebenza futhi CD-, futhi DVD-nezakhiwo.
"KULUNGILE" futhi "Ukuqopha DVD".
Ilinde kwaqedwa inqubo.
Uma ufuna olunye engeza ezinye izingoma, kubalulekile ukwenza konke ngokulandelana efanayo, ngaphandle ukuthi esikhundleni kwento "Dala i-DVD entsha", khetha "Update ekhona".
Manje, kafushane kakhulu mayelana nendlela ukuqopha karaoke disc usebenzisa ImgBurn:
Faka uhlelo (kumahhala, kukhona kungenzeka Russified).
Khetha "Shisa ukuze disc."
Faka nalutho DVD-R noma i-DVD-RW.
Ukukhetha isivinini asisikhulu kunenkosi 4, okungcono 2.4.
Sinikeza igama embhidlangweni wethu.
Ungakwazi ukuqala ukurekhoda.
Ikhompyutha ATX ugesi
Indlela hlola umbhobho kukhompyutha yakho
Khetha Office MFP
Logitech imodeli webcam S270 - isixazululo enkulu for ekhaya kanye nehhovisi!
Uhlolojikelele umbadlana ASUS P8B75-M LX
Variable Resistor nobukhulu bayo
Abalungisa izinwele Kazan aqaphe ubuhle bakho
Brownie nge cream ushizi kanye cherry. Ungadliwa baking amnandi
Heat ngokusebenzisa isikhathi noma isimiso ukusebenza ngokhuni izitofu
Izici isakhiwo zama-athomu metal
Kanjani ukulungisa entry ibhuku? "Ukuqopha ayivumelekile": isampula ukulungiswa
Polyhedra ejwayelekile: izakhi wesimethri futhi endaweni
Sushi ekhaya kwezidingo
Inkinga oluthandwa: Usayizi L, M, X noma XL?
Wedding makeup brunettes: imibono ezithakazelisayo, ubuchwepheshe vula-based kanye nezincomo
Ihhotela Bauman Residence Ihhotela, Phuket, Thailand: Uhlolojikelele, incazelo kanye nokubuyekeza
Oceanic whitetip shark: Uhlolojikelele, izici kwendawo yemvelo
Yiziphi amaqanda nendlela ukukhomba kubo